Neodymium Igwe Ọdụdọ, Samarium Cobalt Igwe Ọdụdọ, Motor Igwe Ọdụdọ - Horizon
Ningbo Horizon Magnetik Technologies Co., Ltd. bụ a pụtara ike emeputa nke obere ụwa Neodymium magnet na ya metụtara magnetik mgbakọ. Site na ahụmịhe anyị na-enweghị atụ na ahụmịhe bara ụba na mpaghara ndọta, anyị nwere ike ịnye ndị ahịa ọtụtụ ngwaahịa magnet site na prototypes ruo imepụta oke, ma nyere ndị ahịa aka inweta azịza dị mma.
Ugboro abụọ kwadoro ishing
RoHS na REACH Dabara
A na-eji magnet Neummium eme ihe na ngwa eletriki na eletrọniki, ọbụnakwa na ngwaahịa ndị na-azụ ahịa ma ọ bụ ihe ụmụaka ji egwuri egwu, yabụ anyị na-eme ihe iji chịkwaa ma kwe nkwa na ngwaahịa magnetik anyị na-agbaso RoHS na REACH.
Ogo nke mbụ na asọmpi asọmpi
Dabere na àgwà mbụ nkà ihe ọmụma, anyị na-mgbe optimizing imewe na mmepụta Filiks, na management ka mma na-eri maka ndị ahịa. Anyị nwere obi ike ịsị na maka otu àgwà ọnụahịa anyị na-asọmpi karịa ndị asọmpi.
Mmeghachi omume ọsọ ọsọ
Nnukwu ihe ọrụ anyị na-enyere anyị aka ịhazi ngwa ngwa n'etiti ngalaba ndị metụtara ya yana nzaghachi ndị ahịa. Ime ụlọ na-arụpụta ikike na ngwa ahịa dị iche iche nke mgbakọ magnetik na-eme ka ị nweta nnyefe oge.
Onye na-ebuputa ya
Obere ụwa Neodymium magnets na njikọ dịgasị iche iche nke Neodymium magnet na-emepụta n'ụlọ. Anyị magnetics nka na-enyere anyị aka isi iyi ndị ọzọ mgbagwoju anya magnet ngwaahịa maka ndị ahịa na-enwe otu-azụ ahịa conveniently.
jisie ike na akụkọ kachasị ọhụrụ yana ederede banyere magnets
NdFeB siri ike na SmCo nwere ike ịme ihe nwere ike ịchụpụ ụfọdụ ihe na enweghị kọntaktị ọ bụla, yabụ ọtụtụ ngwa na-eji atụmatụ a eme ihe, dị ka njikọ magnetik na nfuli magnetically tinyere ngwa ndị na-enweghị akara. Magnetik mbanye couplings enye a na-abụghị kọntaktị tr ...
5G Circulator na Isolator SmCo Igwe Ọdụdọ
5G, teknụzụ nkwukọrịta nke ọgbọ nke ise bụ ọgbọ ọhụrụ nke teknụzụ nkwukọrịta mkpanaka brọdbandị nwere njirimara nke oke ọsọ, obere oge na nnukwu njikọ. Ọ bụ akụrụngwa netwọk iji ghọta igwe na ihe jikọrọ ya. Ntaneti o ...
China Neodymium Igwe Ọdụdọ Ọnọdụ na Atụmatụ
Industrylọ ọrụ na-ahụ maka ihe ndọta igwe nke China na-arụ ọrụ dị mkpa n'ụwa. Ọ bụghị naanị na ụlọ ọrụ ndị na-arụ ọrụ na ngwa, mana ọrụ nyocha anọwo na-arị elu. Na-adịgide adịgide ndọta ihe na-tumadi kewara obere ụdọ magnet, metal na-adịgide adịgide ...